Nagu saabsan - Changzhou Suxing Century Dharka Co., Ltd.
Changzhou Suxing Century Dharka Co., Ltd.
Buuxinta baahiyaha macaamiisha qiime gaar ah iyo adeegyo tayo leh
Way jirtay illaa iyo 1996 ，Diirada saar wax soo saarka dharka
daacadnimo, macaamiil-ku-tiirsan, u janjeedha suuqa, tikniyoolajiyad ku saleysan, hubinta tayada.
Shirkadda Su Xing waxay ku taal magaalada Changzhou, Gobolka Jiangsu, Shiinaha. Waa shirkad isku dhafan wax soo saarka iyo ganacsiga. Shirkadda oo la aasaasay sanadkii 1992, ayaa hadda leh shirkadda Changzhou Suxing dharka Co., LTD Hubei Suxing dharka Co., LTD Changzhou Suxing dharka Co., LTD Shirkaddu waxay leedahay 10 xarriijin wax soo saar, in ka badan 580 shaqaale ah iyo iibin sanadle ah oo dhan $ 55 milyan. In 2012, Shirkadda aasaasay Hubei Suxing Dharka Co., LTD
Shirkaddu waa shirkadda ugu weyn ee soosaarka dharka ee ku taal aagga Liangzihu, Ezhou City, Gobolka Hubei. Waxay leedahay 980 shaqaale ah iyo 31 xarriijin isku-uruurineed, oo sanadkii lagu qiimeeyo wax soo saar dhan 30 milyan oo doolarka Mareykanka ah Shirkadda Su Xing waxay u hoggaansameysaa qallafsanaanta, daacadnimada falsafadda ganacsiga, sanado badan iskaashatooyinka waaweyn ee liistada leh. Waxay noqotay shirkad hormuud u ah shirkadaha dharka badala ee changzhou iyo Hubei. Shahaadooyin badan, shahaado "ISO9001" oo gudaha ah, Shahaado Mareykan ah "Baako (Mas'uuliyadda Waxsoosaarka Wax Soo Saarka Dharka Caalamka), shahaado RCS, shahaado RDS, shahaado saldhigga hubka hago, HIGG SLCP, iwm. Shirkadda Suxing waxaa sidoo kale lagu qiimeeyaa" ganacsi warshadeed horumarsan "," Ganacsiga Dibadda ee Dibedda loo dhoofiyo "," Hufnaanta tayada shirkadaha Shiinaha "," Ururka Warshadaha Dharka ee Changzhou "guddoomiye ku xigeenka shirkadda iyo wixii la mid ah.
S: Sidee loo bilaabaa mashruuc?
J: Si aad u bilawdo mashruucaaga, fadlan noo soo dir sawirrada naqshadeynta oo ay ku jiraan liistada waxyaabaha, tirada iyo dhammeystirka. Kadib, waxaad nagaheli doontaa oraahda 24 saac gudahood.
S: Kamaqaanno gaadiidka caalamiga ah, miyaad maareyn doontaa wax walba oo macquul ah?
J: Xaqiiqdii. Khibrad sannado badan iyo soo-qaadis wadashaqeyn muddo dheer ah ayaa si buuxda noogu taageeri doona. Waxaad na soo ogeysiin kartaa oo keliya taariikhda dhalashada, ka dibna waxaad ka heli doontaa alaabta xafiiska / guriga. Tabashooyin kale ayaa noo daaya.
S: Mudo intee leeg ayay ku qaadataa Sambal ka?
J: Sida caadiga ah muunada borotokoolka waxay qaadataa 3 maalmood, muunada sms waxay qaadataa 7-10days.